Hery Rajaonarimampianina – Addis-Abeba : Resy lahatra amin’ ny asa vita ireo filoha afrikanina -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina – Addis-Abeba : Resy lahatra amin’ ny asa vita ireo filoha afrikanina
31/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nahazoana tombony ary nahomby ny vokatry ny fivoriambe andiany faha-30, izay natrehan’ ireo filoham-pirenena aty Afrika hoy ny filoha malagasy, Hery Rajaonarimampianina, nandritra izay roa andro tatsy Addis-Abeba izay. Izay no navaliny manoloana ireo fanontaniana napetrak’ireo mpanao gazety malagasy niara-dia taminy tany an-toerana, nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa niditra amin’ ny dingana manaraka ireo firenena anatin’ny vondrona afrikanina. Nahitana fihatsarana ihany koa hoy ny Filoha ny fanovana ny rafi-panjakana misy sy ny lafin’ny famatsiana ara-bola. Raha ny mahakasika kosa io lafin’ny fanavaozana ny rafi-panjakana eo anivon’ ny vondrona afrikanina io dia nahitana fandrosoana hita maso izany, indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola, ary izany dia manampy hatrany amin’ny fahaleovantenan’ ny rafitra. Ny fampiharana ny haba 2 % amin’ ireo entana fanondrana amin’ ny firenena anatin’ny vondrona no anisan’ny nahafahana namatsy sy nampandroso hatrany ny vondrona afrikanina . « Io fanampiana io no anisan’ny hampandehanana ny vondrona afrikanina, ary hamatsiana ihany koa ireo asa tanterahiny, eo ny lafin’ny fotodrafitrasa, ny sehatry ny herinaratra, fampianarana ary koa ny fikarohana indrindra indrindra. Ankoatra izay, io vola miditra io no anisan’ny hamatsiana ny asa tanterahina amin’ny fampanjakana ny lafin’ny fandriam-pahalemana aty Afrika ». « Mikasika ny kolikoly indray dia efa misy ny paikady nasionaly napetraka sy ny birao nasionaly miady amin’ ny kolikoly, nefa ireo rehetra ireo dia tokony ho miaraka amin’ ny fanovana toe-tsaina goavana. Hiaraka hanaraka ny vondrona afrikanina tanteraka i Madagasikara amin’ ny ady tanterahina amin’ny kolikoly, izay lohahevitra goavana ho an’ ny taona 2018 » hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety. Ankilany ny fandraisana anjaran’ i Madagasikara tamin’ ity fivoriambe andiany faha-30 ity, dia nomarihina tamin’ ny fampahafantarana ny vokatry ny fikarohana mikasika ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika tamin’ny alalan’ ny filohan’ ny repoblika malagasy, « olana goavana izay efa hikarohana vahaolana amin’ izao ny fametrahana paikadim-pirenena nasionaly mikasika ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ izao fotoana izao » hoy hatrany ny Filoha.
Ny harivan’ ny 29 janoary kosa no nitsidihan’ ny filoha malagasy ny antsoina hoe “ métro” tao Addis- Abeba, ary taorian’ izay no nitsidihina ny fanamboarana fotodrafitrasa sosialy handraisana ireo sarihana na ny “logement sociaux” izay ny fanjakana Ethiopianina no tompon’antoka amin’ izany. Mahakasika kosa ny raharaha eto an-toerana, dia nilaza ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa amin’ny alalan’ ny asa no ahafahana mampiseho ny fahavononana hitondra fanovana ho tombontsoan’ ny vahoaka malagasy. Noho izany dia nitondra fanazavana ny Filoham-pirenena fa amin’ny fodiany aty an-tanindrazana no hitsidihany ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy, izay hitondrany sy hanazavana ny mikasika ny fisandratana hatramin’ ny taona 2030. « Vina izay nanaraka ny famitana ny asa maro ny fisandratana hatramin’ ny taona 2030, ary dia efa hanomboka koa ny asa manaraka . Mitohy hatrany ny dingana, ary hihamafy sy haingana izany. Ny vahoaka no hany mpitsara farany ny asa vita » hoy hatrany ny Filoha.
Nandritra ity fivoriambe ity ihany koa no nihaonan’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina tamin’ ny filohan’ i Burundi, Gaston Sindimwo. Ny mahakasika ny COMESA no nihompanan’ny fihaonan’ ny roa tonta, satria dia anjaran’ity firenena ity ihany koa no handray ny fivorian’ ny COMESA amin’ ity taona ity, izay mazava ho azy moa fa i Madagasikara no filohan’ ny rafitra amin’izao fotoana.Voaresaka nandritra ny fihaonana ihany koa ny mikasika ny fiara miasa vita soa eo amin’ny firenena roa tonta nandritra ny fihaonana, roa taona lasa izay.
Anisan’ ny nihaona tamin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa nandritra ity fivoriambe andiany faha-30 ity ny solontena ambonin’ny filohan’ny kaomisionina, mikasika ny fahanginan’ny basy amin’ ny taona 2020 eo anivon’ ny vondrona afrikanina , ilay teratany alzerianina Ramtane Lamamra.
Tsiahivina ny efa nandalovan’ity tompon’andraikitra ambony aty Afrika ity teto Antananarivo , izay nihaona ihany koa tamin’ny filohan’ny repoblika malagasy Hery Rajaonarimampianina . Maro no noresahina nandritra ny fihaonana eo amin’ny tontolo politika, ary teo ny mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena malagasy.